YATHAZONE - Page9of 95 - NEWS and ENTERTAINMENT
စိတ်ချမ်းသာလို့ ကိုယ်ကျန်းမာချင်လား နာနတ်သီးကို စား
စိတ်ချမ်းသာလို့ ကိုယ်ကျန်းမာချင်လား နာနတ်သီးကို စား နာနတ်သီးဟာ အင်မတန် ဝယ်ယူရ လွယ်ကူတဲ့ သီးနှံဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးကို များစွာ ထောက်ကူပေးတဲ့ သစ်သီးဆိုရင် မမှားပါ။ နာနတ်သီးဟာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မူှကို ပေးရုံမက အသားအရေ တင်းရင်း လှပစေဖို့လည်း များစွာ ထောက်ကူပေး ပါတယ်။ နာနတ်သီးမှာ ဗီတာမင်ဓာတ်တွေ များစွာ ပါဝင်ပြီး ကယ်လဆီယမ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ ဗီတာမင်စီနဲ့ သတ္ထုဓာတ်တွေ များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ် မြောက်မျာစွာကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ချဖို့လည်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ အရိုးအဆစ်နဲ့ နာနတ် နာနတ်သီးမှာ မက်ဂနီစီယမ်ဓာတ်တွေ ပေါကြွယ်ဝတဲ့အတွက် အရိုးသန်မာမူှကို အကျိုးပြုပါတယ်။ အကြောအမျှင်တွေ ခိုင်မာတောင့်တင်းမူှကိုလည်း ပေးပါတယ်။ လူငယ်ရော …
မျက်နှာပေါ်က အမာရွတ်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရလျှင်
မျက်နှာပေါ်က အမာရွတ်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရလျှင် မျက်နှာပေါ်မှာ အမာရွတ်တွေရှိနေရင် စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ဝက်ခြံဆိုတာကတော့ အရွယ်ရောက်တဲ့ လူငယ်တိုင်း အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရတာပါ။ဝက်ခြံဖြစ်ပြီးလို့ ဝက်ခြံပျောက်သွားရင် အမာရွတ်ကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ခဏခဏ ထိတာ၊ ညစ်ပေးတာတွေကြောင့် လည်းတစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။အကောင်းဆုံးကတော့ ဝက်ခြံဖြစ်ရင် မျက်နှာကိုသေချာသစ်ပေးမယ်။ လက်ကိုလည်း သေချာဆေးမယ်။ ပြီးရင် သွားတိုက်ဆေး (သို့) ရေခဲနဲ့ ခဏဝက်ခြံကို အုံထား ဖိထားပေးမယ်ဆိုရင် ဝက်ခြံသက်သာပါတယ်။ အခုတော့ ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမာရွတ်တွေကို ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးသွားမယ်နော်။ ရှားစောင်းလက်ပပ် ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အမာရွတ်တွေကို ထိထိရောက်ရောက်ပျောက်ကင်းစေဖို့ ရှားစောင်းလက်ပက်မှာ ဗီတာမင် ဓာတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး အမာရွတ်တွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ရှာားစောင်းလက်ပပ်အနှစ်ကို မျက်နှာပေါ်မှာ ပုံမှန်လိမ်းပေးရင် အမာရွတ်သက်သာပါတယ်။ အာလူး အာလူးကို …
မတူနိုင် တဲ့ တန်ဘိုးချင်း
မတူနိုင် တဲ့ တန်ဘိုးချင်း တခါတုန်းက သစ်ပင်တွေဟာ စကား ပြောတတ်တယ် ဆိုပဲ ။ စကား ပြောတတ်တဲ့ သစ်ပင်တွေကို ပန်းပုဆရာ တယောက်က ပန်းပုထုဖို့ ယူလာခဲ့တယ် ။ ခုတ်ထားတဲ့ သစ်သားတုံး တွေကို ပန်းပု ထုတော့ သစ်သားတုံး တတုံးက အထုခံရ ၊ အခုတ်ခံရ ၊ အထွင်းခံရ ၊ အရိုက်ခံရ ၊ အနှက်ခံရတော့ ” နာတယ် ” ဆိုပြီး အော်တယ် ။ ဒါကြောင့် ပန်းပုဆရာဟာ အဲ့ သစ်သားတုံးကို အသေးစိတ် မွန်းမံ မနေတော့ဘဲ တုံးမောင်း အဖြစ်နဲ့ပဲ ထားခဲ့လိုက် တော့တယ် …
ရုပ်ချောတဲ့လူတွေသာ နားလည်နိုင်မယ့် အချက်(၆) ချက်
ရုပ်ချောတဲ့လူတွေသာ နားလည်နိုင်မယ့် အချက်(၆) ချက် နေ့စဉ်နေထိုင်နေတဲ့ လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရုပ်ချောနေရင် လူတွေက အရာရာ အဆင်ပြေနေတယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။ ဥပမာ ရုပ်ဖြောင့်တဲ့လူ ပြောတဲ့စကားနဲ့ ရုပ်ဆိုးတဲ့လူ ပြောတဲ့စကားမှာ ရုပ်ဖြောင့်တဲ့လူ ပြောတဲ့စကားက မှားနေမယ်ဆိုရင်တောင် သူပြောတာကို ပိုယုံကြတယ်။ ဒါကလဲ သူ့မှာရှိတဲ့ ဥပဓိရုပ်ရဲ့ အားသာချက်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ချောတိုင်းလဲ အရာအားလုံးအဆင်ပြေမနေပါဘူး။ ရုပ်ချောတဲ့လူတွေဆီမှာလဲ အခက်အခဲကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ ၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မလုံသလိုခံစားရတယ်။ ရုပ်ချောတဲ့ လူတွေဟာ ဘယ်နေရာသွားသွား ချောနေတာကြောင့် အမြဲတမ်းလိုလို လူကြည့်ခံရပါတယ်။ အကြည့်ခံရတာ များလာတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မလုံတော့သလို ခံစားရတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ကြပါတယ်။ ‘ငါဘာဖြစ်နေလို့လဲ လူတွေငါ့ကို ဒီလောက်ကြည့်နေတာ ငါ့မျက်နှာမှာ …
ငိုမယ်ဆိုရင် ငိုပါ .. ငိုပြီးသွားတဲ့အခါ တိတ်ဖို့လိုတယ်
ငိုမယ်ဆိုရင် ငိုပါ .. ငိုပြီးသွားတဲ့အခါ တိတ်ဖို့လိုတယ် ငိုနေတဲ့ မျက်လုံးတွေရှိရင်ခဏလောက် မျက်ရည်တွေသုတ်ပြီး ဒီစာလေး ဆုံးအောင် ဖတ်စေချင်တယ် လူတိုင်း ခက်ခဲနေကြတာပါပဲ ….ပြီးတော့ နာကျင်နေရတာပါပဲ မတူတာက ဒဏ်ရာတွေမတူဘူး အတိမ်အနက်ချင်း မတူဘူး ။ တချို့က ငါ မရှိတော့ရင်ကောင်းမယ်လို့ တွေးလိမ့်မယ် ။ တချို့က ငါ့မှာ ငွေတွေ အများကြီးရှိရင်ကောင်းမယ်လို့ တွေးလိမ့်မယ် ။ သူပြန်ချစ်ရင် သူသာ ဂရုစိုက်ရင် ဆိုပြီးတွေးနေတဲ့သူတွေလဲ ရှိနေမှာပါ ။တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဒဏ်ရာတွေပဲ မတူကြတာ နာကျင်နေရတာချင်းတော့ တူတယ် ။ ဘာကြောင့် နာကျင်နေပါစေ … ငါ မိန်းမသားပဲ ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ပျော့ညံ့နေလို့မဖြစ်ဘူး …
ကောင်လေးချောချောလေးတွေကို ကြည့်ရူခြင်းက အမျိုးသမီးတွေကို မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေ
ကောင်လေးချောချောလေးတွေကို ကြည့်ရူခြင်းက အမျိုးသမီးတွေကို မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေ KBS ရုပ်သံလှိုင်းရဲ့ Discoveries in Life ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကနေ သူတို့ရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု တစ်ခုကို ထုတ်ဖေါ် တင်ဆက်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒါကတော ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ အမျိုးသားတွေကို ကြည့်ခြင်းက ကျောင်းမှာ အမှတ်ကောင်းကောင်း ရစေနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ ပဲဖြစ် ပါတယ် ။ ဒီလေ့လာမှုကိုတော့ သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသမီးတွေနဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် အဲဒီ အမျိုးသမီးတွေကို ၁မိနစ်အတွင်းမှာ လူနဲ့နာမည်တွေ မှတ်နိုင် သလောက် မှတ်ခိုင်းခဲ့ ပါတယ် ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကောင်လေးချောချောလေးတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံကို ကြည့်ခိုင်း ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ …
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ “၁၀” မျိုး
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ “၁၀” မျိုး ယောကျာ်းတစ်ယောက် အလုပ်ကိုင်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ငယ်ရွယ်စဉ်က သူတို့ရဲ့မိခင်၊ ဖခင်တွေက အဓိကပံ့ပိုးမှုတွေ ပေးခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့အိမ်ထောင်ရက်သားကျလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖေါ်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုဟာ ပိုပြီးအဓိကကျသွားပါပြီ။ ပံ့ပိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာ ငွေကြေးပိုင်းရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး ကျန်တဲ့အချက်တွေနဲ့လည်း အများကြီး ဆက်နွယ်နေပါသေးတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အအောင်မြင်ဆုံးနေရာကို တွန်းပို့နိုင်သလို အနိမ့်ကျဆုံးဖြစ်အောင်လည်း ဆွဲချတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာက ဘယ်လောက်တောင် အဓိကကျတတ်သလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုအချက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားရမလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ ၁။ သဘောထားကြီးပြီး လူအကဲခတ်တော်တဲ့မိန်းမ သူမဟာ အင်မတန်မှ ပါးနပ်တတ်ပြီး သင်ရဲ့မျက်တတောင်တခတ်တွင်းမှာ သင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို အကဲခတ်ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပြီး သင်ပျော်နေချိန်မှာ သင်နဲ့အတူပျော်ရွှင်မှုတွေကို အတူခံစားပေးတတ်ပါတယ်။ သင်မျက်မှောင်တစ်ချက်ကုတ်လိုက်လို့ …
ခြံခုန်သူတွေ လူမိတဲ့အခါ ဆင်ခြေပေးလေ့ရှိတဲ့ စကားများ
ခြံခုန်သူတွေ လူမိတဲ့အခါ ဆင်ခြေပေးလေ့ရှိတဲ့ စကားများ အခုခေတ်ကြီးမှာ သမီးရည်းစားတွေ၊ လင်မယားတွေကြားမှာ သစ္စာရှိတယ်ဆိုတာ ချီးကျူးယူရလောက်အောင် ခက်ခဲရှားပါးလာနေသလိုပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူထက် သာတဲ့သူတွေ့ရင် ပိုသာယာမယ်လို့ ထင်မိတာနဲ့တင် သစ္စာဖောက်ဖို့ ဝန်မလေးသူတွေ အရမ်းကို ပေါများလာပါတယ်။ ခေတ်စကားနဲ့ဆို ခြံခုန်ခြင်းပါ။ သစ္စာဖောက်သူတွေ များသောအားဖြင့် ပေးလေ့ရှိတဲ့ ဆင်ခြေတွေကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အမှားတွေကြောင့် သူတို့က တခြားသူဆီ သွားရသလိုမျိုး၊ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် မတော်တဆဖြစ်သလိုမျိုးတွေ သူတို့အပြစ် ပေါ့အောင်ပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ် ။ တကယ်တော့ သစ္စာဖောက်တယ်ဆိုတာ ဘေးဘီပယောဂထက် ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုကလည်း ကိုယ်ဘယ်သူဆိုတာ ဖော်ပြသွားပါတယ်။ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ စကားလေးတွေကတော့ စိတ်ပညာရှင်တွေ အတည်ပြုထားကြတဲ့ ခြံခုန်သူများ ပေးလေ့ရှိတဲ့ ဆင်ခြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ …
ကြက်သွန်ဖြူကို ခေါင်းအုံးအောက်မှာထားပြီး အိပ်ရင် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူး (၅) ခု
ကြက်သွန်ဖြူကို ခေါင်းအုံးအောက်မှာထားပြီး အိပ်ရင် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူး (၅) ခု ကြက်သွန်ဖြူဟာ အနံ့ပြင်းတဲ့ အစားအစာတစ်ခုလို့ တော်တော်များများက သိထားပြီး တစ်ချို့တိုင်းရင်းဆေးတွေမှာလည်း တွယ်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာကြတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ကြက်သွန်ဖြူဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပြီး ရောဂါပိုးမွှားတွေကို သေစေနိုင်ပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီး၊ ကိုလက်စထောကို လျှော့ချပေးကာ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုတွေကိုလည်း တားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် …။ ဒီလိုအစွမ်းထက်လှတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူဥကို ခေါင်းအုံးအောက်မှာထားပြီး အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် နော် …. (၁) အသက်ရှူဝစေတယ် ” ကြက်သွန်ဖြူဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ရှင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ လည်ချောင်းထဲက ချွဲတွေ၊ သလိပ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တာကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ အိပ်ပျော်စေနိုင်ပြီး အသက်ရှူရတာကို …
ကိုယ်ဟန် အမူအရာက လူတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်တဲ့ နေရာမှာ အရေးကြီးသလား
ကိုယ်ဟန် အမူအရာက လူတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်တဲ့ နေရာမှာ အရေးကြီးသလား ကိုယ်ဟန် အမူအရာဟာ လူတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်တဲ့ နေရာမှာ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ အရာပါ ။ ချစ်ရေးချစ်ရာ ကိစ္စတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူမှုဆက်ဆံရေး မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဟန် အမူအရာဟာ သိပ် အရေးကြီးပါတယ် ။ များသော အားဖြင့် လူတွေက Relationship တစ်ခု စတင်တော့မယ် ဆိုရင် ” ငါတို့ နှစ်ယောက် ဆက်ဆံရေး ဘာလို့ အဆင်မပြေတာလဲ ” ” ငါ့ကို သဘောကျရဲ့လား မသိဘူး ” “ဘာလို့ ငါ့ကို ဖုန်းမဆက်တာလဲ ” ..အစ ရှိသဖြင့် …
Previous 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 … 95 Next
ဆံပင်တွေက မကြာခဏ ကျွတ်ပြီး ဆံပင်နှစ်ခွထွက်လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့မိန်းကလေးများအတွက်
သူတို့ မင်းအနားက ထွက်သွားလို့ တစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းနေတာလား
This Year : 1026
Total Users : 253828
Total views : 688869
Copyright©2019 Yathazone. All Rights Reserved